Apple inotarisa kuedza paTouch ID pachiratidziro | IPhone nhau
Apple inotarisa kuedza paTouch ID pachiratidziri
Iyo Cupertino kambani inoramba ichizeza kuisa biometric identification tekinoroji pachiratidziri, chimwe chinhu icho kunyangwe mamwe makambani akagadzira nenzira yepakati, kune vamwe vakaita saHuawei kana Xiaomi vanoshandisa masisitimu aya zvakanaka kwazvo parunhare.
Ndokusaka Apple, iyo isingade kusiiwa kumashure, iri kudzidza kushandisa iyo -chiso Kubata ID inofambidzana neazvino Face ID. Akateedzana patent anoperekedza iyi pfungwa yekuti iyo Cupertino kambani haidi kunyatso kusiya iyo Touch ID asi ... haina kunonoka nezvayo here? Kuitwa kutsva hakumborwadzi.
Tinotanga nekunyevera, kuiswa kweiyi tekinoroji kwakatemerwa zvachose kusvika kweiyo iPhone 13, asi zvinotarisirwa kune iyo iPhone 14 kana zita iro Apple inosarudza kupa chishandiso muna 2022. yakashanda patent inonzi "Yekushandisa mudziyo kuratidza yeiyo-yekuratidzira imaging", sekutsanangurwa kwayakaitwa Apple Insider. Mune dzidziso, kuisirwa patent kunotarisa mukana wekutora zvakatorwa zvigunwe zvedu patinobata chimwe chikamu chechidzitiro, Ine fomula yakapfava kwazvo, ndizvo zvinoitwa nevazhinji vevaverengi veminwe yezvidzitiro, tora mufananidzo wepedyo wemunwe wedu.
Chiso ID, kana uchinge wajaira, inyanzvi yehunyanzvi. Nekudaro, kusvika kweiyi denda uye kushandiswa kwemask zvakatimanikidza kuti tidzokere takananga ku iPhone 5 pakutanga, nekuti Kubata ID hakuna kusvika kusvika iyo iPhone 5s. Tiri kutaura nezvechinyakare asi isingakanganisi tekinoroji yekupinda kodhi kuvhura iyo kifaa, chimwe chinhu chinotendeseka chiri kufinha vazhinji vedu. Nepo masiki acho achinyangarika zvishoma nezvishoma, isu tinogona kungotarisira kuti Apple pakupedzisira inoshandisa Touch ID pachiratidziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inotarisa kuedza paTouch ID pachiratidziri
Hapana chinotangisa maTPS mahedhifoni, iyo Nzeve (1) pamutengo wekugogodza